I-Aurora Borealis eDenmark | Ukuhamba kwe-Absolut
U-Aurora Borealis eDenmark
La Izibani ZaseNyakatho eDenmark kungumbukwane wemvelo oheha izinkulungwane zezivakashi minyaka yonke. Izibani ezimibalabala ezimangalisayo ezigcwalisa isibhakabhaka sazo ziyafana ezingabonakala nakwamanye amazwe aseScandinavia afana neNorway, Sweden noma iFinland. Kodwa-ke, abaningi bakholelwa ukuthi izibani ezingabonakala esibhakabhakeni saseDenmark zihle kakhulu.
Kodwa-ke, lesi simangaliso asibonwa nsuku zonke. Amalambu aseNyakatho eDenmark abonakala kuphela ngesikhathi esithile sonyaka hhayi ngisho nansuku zonke, njengoba ukubonakala kwawo kuncike. Uma unenhlanhla yokuhambela eDenmark futhi ukwazi ukujabulela lesi simanga, uzothatha umbono ongasoze wawukhohlwa.
1 Ayini amalambu asenyakatho?
2 Uzozibona nini izibani ezisenyakatho eDenmark?
3 Izindawo zokubuka amalambu asenyakatho eDenmark
4 Ungazithwebula kanjani izibani zaseNyakatho
Ayini amalambu asenyakatho?
I-aurora borealis (ebizwa nangokuthi i-polar aurora) iyinto eyingqayizivele yomkhathi ezibonakala ngesimo se ukukhanya noma ukukhanya kwesibhakabhaka esibhakabhakeni ebusuku. E-hemisphere eseningizimu yaziwa njenge-aurora eseningizimu.
Ezikhathini zasendulo kwakucatshangwa ukuthi lezi zibani eziyimfihlakalo zasezulwini zivela kuNkulunkulu. E-China, ngokwesibonelo, babaziwa ngokuthi "ama-dragons wezulu." Kusukela ngekhulu leshumi nesikhombisa kuphela waqala ukutadisha lo mkhuba ngokombono wesayensi. Igama elithi "aurora borealis" sikweleta isazi sezinkanyezi saseFrance UPierre Gassendi. Ngemuva kwekhulu leminyaka, owokuqala ukuxhumanisa lo mkhuba namandla kazibuthe womhlaba kwakunguBrithani U-Edmund halley (yona leyo ebala umjikelezo wenkanyezi enomsila kaHalley).
Izibani ZaseNyakatho eDenmark
Namuhla siyazi ukuthi Izibani ZaseNyakatho zenzeka lapho ukukhishwa kwezinhlayiya zelanga elikhokhisiwe kushayisana ne- magnetosphere yoMhlaba, uhlobo lwesihlangu esizungeza iplanethi ngendlela kazibuthe ovela kuzo zombili izingongolo. Ukushayisana phakathi kwezinhlayiya ezinomoya osemkhathini nezinhlayiya ezikhokhisiwe ezivela emisebeni yelanga kubangela ukuthi zikhulule amandla futhi zikhiphe ukukhanya. Lokhu kudala izithunzi ezikhazimulayo eziluhlaza, ezipinki, eziluhlaza okwesibhakabhaka nezinsomi ukudansa esibhakabhakeni Le "ngozi" yenzeka ezindaweni eziphakeme ezisukela kumakhilomitha ayi-100 kuye kwangama-500 ngaphezulu komhlaba.
Uzozibona nini izibani ezisenyakatho eDenmark?
Yize zenzeka unyaka wonke, amaLambu aseNyakatho abonakala kuphela ngezikhathi ezithile. Isikhathi esihle sokubona amalambu asenyakatho eDenmark phakathi kwezinyanga zika-Ephreli noSepthemba. Ngalesi sikhathi sonyaka, ihlobo elisenyakatho nehlobo, ubusuku bumnyama futhi isibhakabhaka sinamafu amancane.
Lapho kuhwalala nangemva kokushona kwelanga yilapho lezi zibani zemilingo ziqala ukuvela khona. Izibani ZaseNyakatho (ezaziwa amaDanes njenge ngokujwayelekile) kumangaza abantu bakwamanye amazwe, ikakhulukazi labo abavela kwezinye izindawo futhi abangakaze bayibone le nto ngaphambili.
Ngeshwa, ngezinsuku ezinesiphepho noma lapho kunguMsombuluko, cishe akunakwenzeka ukufakazela umlingo wamalambu asenyakatho. Uma kunesiphepho, ngeke ukwazi ukubona iLights Lights, njengoba isibhakabhaka sikhanya kakhulu ukuthi imibala yaso ingakhonjiswa kahle iso lomuntu.
Esilandelayo timelapse ividiyo, kuqoshwe ku I-Limfjord Ngo-2019, ungawaqonda amandla agcwele alo mbukwane wemvelo:
Izindawo zokubuka amalambu asenyakatho eDenmark
Nazi ezinye zezindawo ezinhle kakhulu zokubona iLights Northern eDenmark:
Iziqhingi zaseFaroe. Kuleli qoqo leziqhingi eliphakathi kweNyakatho ye-Atlantic noLwandle lwaseNorway, akukho ukungcola okuncane, okuyisiqinisekiso samazulu acwebile futhi acwebile ukucabanga ngezibani zaseNyakatho ngokugcwele.
IGrenen Yisihlonhlo esincane esisenyakatho enkulu yezwe laseDenmark. Ngaphezu kobubanzi, okwenza le ndawo ibe yindawo enhle yokubuka ukungabikho kokukhanya okufakelwayo ezindaweni zokuhlala kwabantu.
UKjul Strand, ibhishi elide emaphethelweni edolobha lase Ama-Hirtshals, lapho kusuka khona izikebhe eziningi eziya eNorway.
USamso, isiqhingi esisentshonalanga yeCopenhagen futhi esidume ngemvelo yaso egcinwe kahle. Ngenye yezinto ezinhle kakhulu izindawo zemvelo zaseDenmark.
Ungazithwebula kanjani izibani zaseNyakatho
Cishe wonke umuntu ofakaza nge-aurora borealis eDenmark uzama ukubamba ubuhle bale nto ngamakhamera wabo wezithombe noma wevidiyo, abambe umlingo wayo ingunaphakade.
Ukuze isithombe sibhaliswe kahle, kuyadingeka sebenzisa isethingi yokuvezwa isikhathi eside. Ngamanye amagama, i-shutter yekhamera kufanele ihlale ivulekile isikhathi eside (imizuzwana eyi-10 noma ngaphezulu), ngaleyo ndlela ivule ukukhanya okwengeziwe.
Kubalulekile futhi sebenzisa i-tripod ukuqinisekisa ukuzinza kwekhamera ngesikhathi sokuchayeka.
Naphezu kwakho konke, futhi noma ngabe ahamba kahle kanjani lawo mavidiyo nezithombe, akukho okuqhathaniswa nomuzwa wokubuka izibani eziyizipoki zamalambu asenyakatho zindiza esibhakabhakeni, ngaphezulu kwamakhanda ethu. Isipiliyoni esifanele ukujatshulelwa okungenani kanye empilweni yakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » U-Aurora Borealis eDenmark
Ukuhamba e-United States
UTudor wasukuma, imbali yezwe laseNgilandi